Indlela kaZherlygin Yesifo Sikashukela Esihle kakhulu: Ividiyo yokuzivocavoca eyinkimbinkimbi > Izindlela
IMoskovsky Komsomolets No. 2453 yangoNovemba 10, 2006
Running from sikashukela.
"Ufuna ukunqoba lesi sifo, ugijime, gxuma, undize ekugcineni!"
Lawa mazwi ashiwo eminyakeni eminingana eyedlule ehhovisi lomhleli wesazi semidlalo yezokwelapha iMK uBoris Zherlygin.
Ngemuva kwalokho, saxoxa futhi sahlangana kaningi. Ngemuva kwekuhlanganisa labo labanesifo sikashukela kutsi babe licembu, ubadonsa bancintise imincintiswano yemidlalo leminyenti - umncintiswano waminyaka yonke weMosco International Peace Marathon, “Ski Track of Russia” kanye nalabanye. Futhi lapho, kanye ngokusebenzisa nabantu abagulayo akugcini nje ngokunqoba ibanga, kodwa futhi nokuwina imiklomelo. Futhi abanye beshukela, bethatha nje izinyawo zabo ezandleni, nsuku zonke uhamba amakhilomitha, uyahamba nge-skiing, ubhukuda uzilimaza nge-gymnastics ekhethekile futhi, cabanga, isifo sikashukela yisifo esibi. Ngaphandle kokungabaza nabaphikisi ababekiwe bezindlela ezilula.
"Kodwa iqiniso ukuthi kuze kube muva nje, abanesifo sikashukela esinzima basinda kulesi sifo ngokuzivocavoca nsuku zonke," kusho uBoris Stepanovich. - Abaningi benqaba izidakamizwa, baphila impilo ephelele.
Othandekayo wayo yonke imicimbi - empilweni umphephisi wemvelo osathatha umhlalaphansi kakhulu - uVladimir Sergeyevich Makarenko. Kuze kube kuphela kweminyaka engama-40, wayengazazi izifo. Futhi ngokuzumayo! Ngesikhathi sokuhlolwa kwezokwelapha ngonyaka, kutholakale ushukela wegazi ophakeme. Ngemuva kweminyaka eyi-17 (!) Ngokuthatha amaphilisi esifo sikashukela esibi, waba nokuhlaselwa yisifo senhliziyo esibhedlela saseBurdenko, lapho empeleni wasindiswa. Kepha lapho i-endocrinologist iphinde yanquma i-insulin (izinga likashukela lagxumela ku-14-17 mmol / ilitha (ejwayelekile eyi-3.5-5,5 m / mmol) Wahlala kwi-insulin iminyaka emithathu, wabe eseya kochwepheshe bezemidlalo, wahlangana noZherlygin.
Kuqale ukwenziwa okwenzeka ngokomzimba. ukuzivocavoca, kancane kancane ukhulisa umthwalo ngenkathi kunciphisa imithamo ye-insulin. Wenqabile amaphilisi ngokushesha okukhulu, futhi ngemuva kwenyanga nesigamu - kusuka ku-insulin.
UVladimir Sergeyevich uthi: “Inhliziyo ibuye yabuya kancane kancane. -Ngiyelulekwe hhayi kuphela iqoqo lokuzivocavoca, kodwa futhi nganikwa ukholo lokuthi ngizoba nempilo. Futhi ngokweqiniso, manje sengiphilile. Kubukeka ngathi yinganekwane, futhi, ukube bekungenami, ngabe angiyikholwa. Uma ngingaphuli ukudla, ushukela uvamile. Ingcindezi ingaphansi kancane kokujwayelekile, kepha umfutho wegazi ophakeme ungena ophahleni. Imilenze yami ilimele. Umbono usuthuthukile. Ekuseni izikhathi ezi-3 ngeviki ngibhukuda echibini ngekhilomitha elilodwa nohhafu, ngigijima kakhulu . Ababili babambe iqhaza emiqhudelwaneni - babaleka amakhilomitha ayi-10.
UVladimir Sergeevich uqinisekile: onesifo sikashukela, ikakhulukazi uhlobo 2, ungaphila ngaphandle kwezidakamizwa. Kusetshenziswa umsebenzi womzimba okhethwe kahle Buyisela ngempela ukusebenza ngisho nangemva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo. Kepha kufanele usebenze kanzima, ungabivilapha. Musa ukudla ngokweqile, ngoba ukukhuluphala cishe kuyisihlava esikhulu sikashukela. “Manje ngisebenza enkampanini eyenza imishini ehlobene nokusindisa abantu ngemuva kwengozi yemoto. Ubenesandla kwenye yezinsimbi, amtholela yona indondo yeVDNKh. Ngingunjiniyela phambilini, umsunguli ohlonishwayo wase-USSR. ”
By indlela. I-WHO iyaxwayisa: ngamaphesenti angama-90 amacala, isifo sikashukela sibangelwa ukukhuluphala. Mhlawumbe yingakho isifo sikashukela, ikakhulukazi sohlobo 2, ebesilokhu sithathwa njengelungelo labantu asebekhulile, namuhla sithinta intsha kanye nezingane ngokwengeziwe - inani lentsha eyeqile ngokweqile likhula. Amaphesenti angama-50 esifo sikashukela sohlobo 2 angavinjwa uma abantu bebheka isisindo sabo.
“Umama kukhuza izikhathi ezingama-600 zilandelana ”
U-Boris Zherlygin akazange azizwe esoshukela ngokushesha. Ekuqaleni kweminyaka engama-90s, manje osekuyiminyaka edlule, wasebenza nabadlali beqembu lesizwe. Ngokuhlangana nodokotela, abaqeqeshi, ngakhetha imithwalo yokuqeqesha yabasubathi nokudla kwabo. Kepha okwenzekile emndenini kwaphoqa ukuthi singene kwisifo esithile - umama wami washaywa yisifo sikashukela. U-Olga Fedorovna ngaleso sikhathi wayeneminyaka engama-60. Lapho eneminyaka engama-75 ubudala, kwaqala ukuba nezinkinga ezinkulu - kwavela izilonda emilenzeni, izinso zahluleka, ukuwa kwamehlo.
Indodana yangena ezincwadini ezikhethekile, yanikeza umama wayo ukudla okungekho emthethweni, egcotshwe uhambe ngaphezulu, yenza imithambo yokuzivocavoca, ikakhulukazi i-squat eningi . Futhi ku-82, u-Olga Fedorovna ... wagijima isiphambano. Nqobile ikhilomitha yonke. "Udinga ukuqeda ukugijima, ugogo," loyo oshukela onesifo sikashukela wamphonsa lapho ebaleka. “Uyini, ngiqala nje,” kuphefumula umhlanganyeli onesibindi kakhulu.
“Ngalesi sikhathi, umama wayengasenaso isifo sikashukela,” kukhumbula uBoris Stepanovich. - Ushukela ubuyela kokujwayelekile, esikhundleni se-10 mmol / ilitha waba ngu-4-5 mmol / ilitha - lesi yisimo impela. Ngaphezu kwalokho, ungumpetha kuma-squats eminyakeni yakhe! Eminyakeni engama-80, angakwazi ukuphinda amahlandla angama-200 kuya kuma-20000, ngezikhathi ezingama-85- 500, manje uma eneminyaka engama-88 angalala kuze kube izikhathi ezingama-600 zilandelana!
Kungani ngithi ngaphezulu mayelana squats ? Ngoba ngokunembile lo msebenzi usiza ngokwejwayelekile i-carbohydrate metabolism . Indoda yethu yaseRussia inalesi sakhiwo: ayidli kahle, iyayeka ukuhamba, iyabhema futhi ngaleyo ndlela yandise amasango okugula kwayo. Futhi siguqula indlela yethu yokuphila, futhi izifo ziyabuya. Asimlaphi umuntu onesifo sikashukela, sinqoba isifo sikashukela. Indlela, ngokuvamile, ayiyintsha. Kulezi zinsuku, kunamacala aziwayo okususa isifo sikashukela ngendlela yeNeumyvakin, Shatalova, Malakhov. Kepha umphakathi awukakulungeli ukubonwa kwalezi zindlela. Futhi hhayi ngoba umuthi osemthethweni uphikisana, kodwa ngenxa ye-inertia yawo uqobo. Asikujwayele ukusebenza uma kukhulunywa ngezempilo. "Sivila futhi asifuni ukwazi," kuphawula u-Alexander Sergeyevich Pushkin.
Uma ungafuni "ukulala ngokweqile" ushukela, nikela ngegazi ushukela ngezikhathi ezithile, okungenani kanye ngonyaka. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kulabo abanomuntu onesifo sikashukela emndenini wabo.
Nikela ngegazi ushukela uma:
- ukhuluphele, ukukhuluphala, ukukhuluphala,
-ivame ukuzizwa yomile futhi yomile umlomo,
- Ngaphandle kwesizathu banciphisa kakhulu isisindo,
- kuvame ukukhathala, ukusebenza okunciphile,
- amanxeba akho nokuqunjelwa kwaqala ukwelashwa kahle,
- ukwanda kokuchama.
By indlela. Isifo sikashukela i-mellitus yisifo esivele kuqala eRussia phakathi kwalezo eziholela ekukhubazekeni nakwesithathu ekufeni kwabantu.
Ukushaja kusuka kudokotela wezokwelapha wezempilo Zherlygin:
1. Ukuzivocavoca ngesandiso senjoloba (ibhendi elula yerabha). Lala ngomhlane wakho mat, ukhune irabha ngonyawo, elinye uhlangothi emlenzeni wombhede, welule umlenze wakho, kancane udonsele ubheke kuwe bese udedela isandisi. Lo msebenzi ungaba yinkimbinkimbi: beka unyawo lapho irabha selivele labanjiswa khona, libeke onqenqemeni lombhede noma efasiteleni bese udonsa irabha phezu kwakho. Uma ukuvumelana nezimo kuvumela, ukuyekela irabha, kuyekela onyaweni.
2. Qamba amanga emhlane wakho. Izandla ziqonde kanye emzimbeni. Bopha umlenze wesokudla edolweni bese ulihudula ehlombe, uqonde emlenzeni. Yenza okufanayo ngonyawo lwesobunxele. (Kwenziwa ngempilo, imvamisa izikhathi eziyi-10-15.)
3. Lala emhlane wakho embhedeni, beka izinyawo zakho odongeni nge-angle engu-60-80 °. Ngokudonsa ngokuxega amadolo angakwesokunxele nangakwesokunxele ehlombe bese ubuyela emuva. Yenza ngaphambi kokudonsa ezinyaweni nakumathole. Lo msebenzi ulusizo ikakhulukazi kulabo asebevele benokwephulwa kokujikeleza kwe-venous (i-neuropathy, i-angiopathy, njll.) Ukwenza kaningana ngosuku. Uma umuntu enesifo sikashukela esithuthukile futhi esivele enezinkinga ngezinso noma ngenhliziyo, lokhu kuvivinya umzimba kwenziwa kangcono kurabi lokuvakasha elinzima, lapho athululela khona ingilazi ye-buckwheat. Mqambe amanga kuT-shirt elincane noma emuva.
4. Hlala phansi, uncike ezandleni zakho ngemuva, uphakamise i-pelvis yakho bese “uhambe” kulesi sikhundla ngokuhlukile izandla zakho ziye phambili, bese unyawo lubheke phambili. Futhi uma ungakwazi ukunyakaza kanjalo, vele ukhiphe i-pelvis yakho kusuka phansi, yima bese uzithoba. Uma umuntu esethola kunzima, ungahamba ekhaphethini elithambile kuwo womane.
5. Isikwele. Qina ngokugcwele ukwesekwa esezingeni lebhande (ukhuni, i-balcony Railing, udonga lwaseSweden). Izandla ziqonde, izinyawo ziyafana komunye nomunye kubude obuyi-5-10 cm ukusuka komunye nomunye, amasokisi asondele ekusekelweni. Imilenze kufanele ihlale ingashukumi ngesikhathi sokuvivinya umzimba. Ukuncika umzimba emuva, yenza izikebhe ngakwesokunene emadolweni. Okokuqala, ijubane lincane.
6. Ngena ngezinyawo zakho, hlikihla irabha ngemuva komhlane wakho (ngemuva kombhede, ngemuva kwevulandi le-balcony) bese wenza umdlalo wesibhakela "wesibhakela sesibhakela" - shaya ophikisana naye ngezandla zakho. (Lo msebenzi wenziwa inqobo nje njengamandla anele.)
Uma lezi zivivinyo zenziwa ngokuhlelekile futhi zilethwe imizuzu engama-7 noma ngaphezulu ngosuku, ushukela wegazi uzokwehla.
Kuhlolwe ngu: nciphisa kangcono ushukela wamagazi kanye “nesithunzi somdlalo wesibhakela” . Ukwenza ngcono kuza ezinsukwini ezi-3. Vele, uma kungekho okuphikisana ngokomzimba. Futhi uma umuntu ebuthakathaka futhi eqala ngomthwalo omncane kakhulu, khona-ke ukuthuthukiswa kuzozizwa ngenyanga.
Zonke izivivinyo zenziwa kuphela ngemvume kadokotela.
Udinga ukuziqalela ngenani elincane futhi kancane kancane ukhuphule umthwalo (nsuku zonke izikhathi ezingama-2-3).
Konke okumele ukwenze ngokuya ngesimo sempilo nempilo okwamanje. Into esemqoka ukungalimazi.
Ukulawula ukushaya - akufanele kudlule imingcele enconyelwe udokotela noma umqeqeshi.